Madaxweynaha naadiga Barcelona oo difaacay ku ciyaaridda garoonka maran - BBC News Somali
Madaxweynaha naadiga Barcelona oo difaacay ku ciyaaridda garoonka maran
Madaxweynaha naadiga Barcelona, Josep Maria Bartomeu ayaa difaacay ciyaartii ay Axaddii dheeleen iyadoo aysan taageereyaal ka soo qaybgalin, taas oo ay la yeesheen naadiga Las Palmas, isaga oo arrintaas ku tilmaamay mid ka mid ah go'aamaddii ugu adkaa ee uu qaato.
Barca ayaa 3-0 ku guulaysatay iyadoo uu marnaa garoonka Nou Camp, ka dib markii laga diiday codsigoodii ahaa in dib loo dhigo, maadaama oo daganaansho la'aan siyaasadeed ay ka jirto gobolka Catalonia.
Barcelona ayaa lix dhibcood laga jari lahaa haddii ay diidi lahaayeen in ay ciyaartaas ka qaybqaataan.
Ciyaaryahannada Barcelona iyo shaqaalaha kooxda ayaa Talaadadan ka qaybqaadan doona mudaaharaadyada ka dhici doona gobolka oo dhan.
Labada kooxood ee kale ee Horyaalka La Liga ka dheela ee gobolkan ka soo jeeda oo kala ah spanyol iyo Girona iyo shaqaalahooda ayaa iyagana ka qaybgali doona mudaaharaadka guud, wax ciyaaro ahna ma saamayn doonto maadaama oo lagu jiro fasixii ciyaaraha caalamiga ah.
Pique: ciyaartoyda Barcelona waa bani-aadan
Tuhmanayaashii weerarkii Barcelona oo la maxkamadaynayo
Messi oo aqblay heshiis cusub oo uu kula sii joogayo Barcelona
Dad lagu qiyaasay 850 ruux ayaa ku dhaawacmay isku dhacyadii booliiska ee Sabtidii iyo Axaddii, iyadoo dadka Catalonia ay u codeeyeen aftida madaxbannaanida oo dawladda Spain ay ku tilmaantay mid sharci darro ah.